Wednesday October 23, 2019 - 05:53:00 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Taliyaha ciidanka lugta federaalka Soomaaliya waxaa loo magacaabay nin gashaanle dhexe ahaa haddana si degdeg ah janan loo bootiyay beeshiisuna tahay beesha guud ee Galmudug, halka taliyaha taliye-kuxigeenka ciidanka xooggana loo magacaabay nin isna gaashaanle ahaa halmar loo bootiyay janaraal kuna beel ah beesha guud madaxwayne Maxamed C/LLaahi Farmaajo.
Wasaaradda gaashaandhigga waxaa imikadan (reesto) ku ah taliyaha guutada 7-aad qaybta 60-maad Xasan Jaamici u dhashay Galmudug, kadib kolkii isaga iyo Janaraal Laba-Afle oo isna Galmudug ka soo jeeda ahna Taliyaha guutada 6-aad qaybta 60-maad iyo atbaacdooda qabiil ahaan ay isugu dayeen inay dowlladda federaalka Soomaaliya afgambiyaan bishii september gudaheeda shir qarsoodi ah ay ku yeesheen magaalada Muqdisho la ogaaday, oo Jaamici kolkay maxkamadda ciidanka qalabka sida ay u yeertay uu maxkamadda la soo galay ciidamo badan iyo BKM-yo, taaso dhalisay in kabtankii illinka maxkamadda joogay goortuu ku yiri ciidanka dib u celi, uu Xasan Jaamiciga awoodda isbida dhirbaaxo ku jiiday kabtankii albaabka joogay waajibkiisi qaran gudanayay, deetana hubkiisi ciidankiisu dabajooga xafiisyadu u gudbay, iyado xafiisyada iriddoodu markuu soo gaaray uu ka soo hor baxay sarkaal saro janan ah kuna yiri Jaamici "digtoonow."
Xasan Jaamici kolkuu digtoonowdu qaatay, waxaa janankii uu ciidamadii Jaamici gudaha maxkamadda la soo galay ku amray inay dhaqaaqaan ooy Afgooye JBM meel ka sokeysana aanay ku sii nasan karin, iyadoona Xasan Jaamici taliyihii guutada 7-aad qaybta 60-maad xadgudubkii sharciga seerjitada u yaal uu jabshay daraaddeed loogu reesteeyay wasaaradda gaashaandhigga federaalka Soomaaliya, hawshii guutaduna uu wado waqtul-xaadirkan kornayl C/LLaahi Daawlle oo u dhashay JBM ee uu imikadan wado tirakoobkii waayahanba socday ee ciidanku, waxaana sido kale Muqdisho aan soo dhaafi karin illaa iyo amar dambe taliyaha guutada 6-aad qaybta 60-aad Laba-Afle iyo xulufadooda dhiigga Maayland, gaar ahaan gobolka Shabeellaha-Hoose Jamhuuriyadda Barakaysan Ee Maayland qubaya habeen iyo maalinba, iyado geesta kalana ururkii joogay Afgooye JBM kii haystay Liibaan Madaxwayne xilkii laga qaaday loona dhiibay isla nin kalo mooryaan reer Galmudug ah lagu magacaabo Cali Sheellare gaashaan garbaha loo suray qabyaaladi ka soo kamkamayso.
Dhanka degmada Wanlawayn gobolka Shabeellaha-Hoose JBM waxaa lagu dhaawacay qof rayid ah, kadib kolkii 2 maleeshiyo midi Maayland u dhashay midina uu ku beel yahay Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ay gaari rakaab ah 40-kuno Shilin Soomaali ah Isbaaro kaga qaateen ay isku dagaaleen, isbaaradaasoona ay dhigteen degmada Daafeet meel 6 km u jirta dhinaca galbeed la yiraahdo Dudumaay jihada Toora-Toorow jiirada Haakaaw, waxaana xusid mudan in magaalada isbaarooyinka badan ay reer Galnudug u yaallaan sida saraha shirkadaha hormuud iyo Nation-Link 2-Xiddigle Gaandiye u dhashay Galmudug ahna taliyaha horinta 2-aad guutada 7-aad qaybta 60-maad qaadku kolkuu soo dhaco maalin waliba isaga iyo ciidankiisu magaalada dadku ku dhamaynayaan fawdada iyo fadqalladaha loomaarawaaga ah, ee uuna intaasi mashaakil ah Maxamed Siidow guddoonka degmadu ku eeganayo raalina uga yahay mooryaantaasi doolki inay baladkiisu isbaarooyinku dhigtaan kufsadaana ragga iyo dumarka walaalihiisa reer Maayland-ka dulman.
Jidadka dhulkan lagu soo duulay xirana, doonidii reer Galmudugi dabajeexyadu ay la soo fuuleen duraad badda kula qallibantay, waxaa haatan maydadkoodu ay ku soo kala caariyeen Jaziira iyo Marka iyo Cad-Caddey oo u dhow Jilib-marka gobolkan Shabeellaha-Hoose Jamhuuriyadda Barakaysan Ee Maayland.
Haddii aynu eegno dhanka shaxda wasaaraaradda gaashaandhigga hoggaanadeeda Soomaalida 5-qabiil ah inay u siman tahay iyo in kale.
1.Taliyaha ciidamada xoogga waa janaraal Odawaa Yuusuf Raage ku beel ah Xasan Safarow. 2.Taliyaha hoggaanka maamulka lacagta waa oo janaraal Ibraahin. Fiiro gaar ah: sarkaalkan isago isbatoore ah ayuu koorso Turkiga kaga soo baxay waxaana degdeg loogu dallacsiiyay kabtan haatana gaashaanle ayaa laga dhigay wuxuuna ku beel yahay Xasan Safarow. 3. Taliye-Kugeenka hoggaanka maamulka lacagta waa Kabtan C/Fitaax ku beel ah Fahad Yaasiin. 4.Taliyaha hoggaanka hubka iyo rasaasta waa janaraal Xasan ku beel ah Fahad Yaasiin. 5.Taliyaha hoggaanka gaadiidka waa janaraal Raage ku beel ah raysal-wasaare Xasan Cali Kheyre. 6.Taliyaha hoggaanka xafiiska ciidanka waa gaashaanle Cimraan beeshiisu Maayland ma aha. 7.Taliyaha hoggaanka Saadka waa gaashaanle Sharmaarke ku beel ah wasiir Goodax Barre. 8. Taliyaha hoggaanka siyaasadda waa gaashaanle sare Qorane ku beel madaxwayne Maxamed C/LLaahi Farmaajo. 9.Taliyaha hoggaanka hawlgalka waa gaashaanle dhexe Iimaan Elman ku beel ah Galmudug. 10.Taliyaha hoggaanka sirdoonka waa gaashaanle dhexe muuse ku beel ah raysal-wasaare Xasan Cali Kheyre. 11.Hoggaanka dhismaha iyo hoggaanka sancada, labadan hoggaan waxaa isku haya nin lagu magacaabo janaraal Mahdi ku beel ah Fahad Yaasiin, halka kuxigernkiisu dhanka hoggaanka dhismaha yahay sarkaal Maayland u dhashay lagu magacaabo kornayl Jiidow musuqmaasuq been ah intuu ku eedayay xabsigu liintu ku cabbayo, iyado xitaa sharcigu uu dhigay sarkaal inaan xabsi la dhigi karin, la reestayn karayo uun.
12 Taliyaha hoggaanka tababarka waa janaraal Madoobe oo horaan into xilka laga qaaday haatan dib loogu soo celshay janankan u dhashay Maayland.
13.Taliyaha amniga wasaaradda gaashigga iyo nawaaxigeeda wuxuu ahaa janaraal Bile u dhashay Maayland, xilkaasi imikadan ayaa laga qaaday, waxaana loo dhiibay booskiisi nin lagu nagacaabo janaraal Qaanso ku beel ah raysal-wasaare Xasan Cali Kheyre.
Haddaba dadow qalin buug intaad qaadataan tirada adinkoon qaldaynin safaaraduhu ha dambeeyaane iyo xilalka kalo qarsoon kuwa hoose ku lifaaqaya saamigu ma saxan yahay?
1.Taliyaha ciidanka xoogga waa janaraal Odawaa Yusuf Raage ku beel ah madaxwayne Xasan Shiikh Maxamuud Safarow.
2.Taliye-kuxigeenka ciidanka xooggu waa janan ku beel ah madaxwayne Maxamed C/LLaahi Farmaajo.
3 Taliyaha ciidanka lugta waa janan beesha guud Galmudug ah.
4.Taliye-kuxigeenka ciidanka lugtu waa janaraal ku beel ah madaxwayne Maxamed C/LLaahi Farmaajo.
5.Taliyaha bilayska federaalka Soomaaliya waa janaraal Xajaar oo ku beel ah beesha guud madaxwayne Maxamed C/LLaahi Farmaajo, haddaa inta kale tolow ma rootibaa?
Adaa baran waayay adaa baran waayay buuggii lagu siiyayna amar Alle laakiin!!